Waxsoosaar Sare: A To Do List iyo Timestamp App | Laga soo bilaabo Linux
In kasta oo isticmaaleyaal badani, ama sababo dhadhan shakhsiyeed ama baahiyo shaqo, ay u muuqdaan kuwo jecel qalabka software ka buuxo functionalities, badhamada iyo accessories, kuwa kale waxay doorbidaan caksiga, kuwaas kacsan, fudud oo toosan barta, maxaa yeelay waxay dareemayaan koror ku jira wax soo saar, adoo yeelanaya mashquul yar. Jaahwareerka noocan ah ayaa badanaa dhacda, gudaha codsiyada otomatiga xafiiska, taas oo badanaa ku darsata xaddi badan oo shaqeynaya adeegsadaha.
Taasina waa sababta xafiiska ama codsiyada kale badiyaa loo abuuro si looga caawiyo dadka isticmaala inay toos u gaadhaan barta ay u baahan yihiin inay sameeyaan. Goobta shaqada iyo xirfadleyda, arjiga "Wax soo saar sare"ama "Wax soo saar wax soo saar leh", Isbaanishka, ayaa taagan sababtoo ah waa barnaamij faa'iido leh oo xiiso leh Liiska Hawsha (Wax-Qabashada) y Waqtiga Raadiyaha barnaamijyada iyo shaqaalaha kale ee dhijitaalka ah ee leh isdhexgalka Jiira, Github iyo Gitlab.
Kahor intaanan toos ula boodin "Wax soo saar sare", waxaan dooneynaa inaan ku darno taas dhanka wax soosaarka ee ku saabsan nidaamka qalliinka ee GNU / Linux, waxaan sidoo kale ka hadalnay waxyaabo kale barnaamijyada muhiimka ah si aad uga wax soo saar badan u yeelato, sidaa darteed waxaannu kaaga tagnay hoosta, qaar qoraallo hore oo la xiriira mawduucaas, si aad u sahamiso oo aad u akhrido ka dib markaad dhammaystirto daabacaddan:
1 Waxsoosaarka Sare: App To-Do & Time Tracker
1.1 Waa maxay Waxsoosaarka Super?
1.2 Astaamaha ugu muhiimsan
Waxsoosaarka Sare: App To-Do & Time Tracker
Waa maxay Waxsoosaarka Super?
Labadaba isaga bogga rasmiga ah ee Web iyo GitHub, waxaa lagu tilmaamay sida soo socota:
"Liistada Shakhsi ahaanta loo Sameeyo, Raadinta Waqtiga iyo Maareeyaha Hawsha, oo ku habboon barnaamijyada iyo shaqaalaha kale ee dhijitaalka ah, taas oo sidoo kale leh is-dhexgal ku saabsan Jira, Github iyo Gitlab. Intaas waxaa sii dheer, waa iskutallaab-isweydaarsi (Linux, MacOS iyo Windows) ujeeddadeedana ugu weyni waa in la yareeyo waqtiga ay isticmaaleyaashu ku celceliyaan howlaha soo noqnoqda iyo in la helo meel laga soo ururiyo dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in lagu qabto shaqo ama hawl gaar ah."
Kuu ogolaanayaa in la qorsheeyo, la socdo oo la soo koobo waxqabadyadaIyadoo la abuurayo waraaqo shaqo oo kooban iyo soo koobitaanno shaqo, oo ah bil-bilig, oo markaa si fudud loogu dhoofin karo codsiyada kale.
Waxay leedahay is-dhexgal aad u fiican oo lala yeesho Jira, GitHub iyo GitLab: Taas oo sahleysa in si otomaatig ah loo soo dejiyo howlaha loo xilsaaray. Intaa waxaa dheer, waa waxtar in la qorsheeyo faahfaahinta maxalliga ah, si toos ah loo abuuro diiwaanno shaqo maalinle ah (worklogs) oo la hubiyo rasiidka ogeysiisyada degdegga ah markay wax iska beddelaan.
Waxay fududeeysaa abaabulka xogta mashaariicda la maareynayoAdoo abuuraya qoraalo, awood u leh inaad ku lifaaqdo feylal ama aad u sameyso calaamado xiriir, faylal iyo xitaa amarro.
Waxay kaa caawineysaa sameynta caadooyin shaqo oo caafimaad qaba: Waad ku mahadsan tahay ku darista waqtiga nasashada, taas oo xasuusinaysa isticmaaleyaasha markay tahay inay nastaan. Waxa kale oo aad ururin kartaa jaangooyooyin shaqsiyeed, oo markaa la eegi karo si loo xaqiijiyo howlaha joogtada ah ee laga yaabo inay u baahan yihiin hagaajin u roon wax soo saarkeena.
Nota: Sameeyahaaga ayaa taas hubiya "Wax soo saar sare" ma ururinayso wax xog ah, mana aha lagama maarmaan in la isticmaalo xisaabaadka isticmaalaha ama diiwaangelinta. Dheeraad ah, waa il furan oo furan, weligeedna way ahaan doontaa. Ugu dambeyntiina, marka laga hadlayo GNU / Linux waxay hadda leedahay rakibayaasha qaababka ".deb" iyo ".AppImage", sidaa darteed soo dejiso, rakibid iyo isticmaal Waa wax aad u fudud. Xilligan, isaga ayaa u socda nambarka xasilloon ee 6.3.3.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Super Productivity», oo ah barnaamij faa'iido leh oo xiiso leh Liiska Hawsha (Wax-Qabashada) y Waqtiga Raadiyaha barnaamijyada iyo shaqaalaha kale ee dhijitaalka ah ee leh isdhexgalka Jiira, Github iyo Gitlab; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxsoosaarka Sare: A To List & Waqtiga Dabagalka App
Dadyahow haye, qaar idinka mid ah waxay isticmaalaan Qorsheeye, waa maamule hawleed u gaar ah Linux, oo leh UI qurux badan iyo taageero Todoist.
Salaan kadib, Calain. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Hore ayaan u eegay, waxaan u tixgelin doonaa daabacaad mustaqbalka ah.
Fedora wuxuu Kinoite u soo bandhigayaa dhiggiisa Silverblue sidoo kale wuxuu qorsheynayaa inuu u guuro FreeType ilaa HarfBuzz